Accueil > Gazetin'ny nosy > Fiangonana sekta : Akatony daholo aloha !
Fiangonana sekta : Akatony daholo aloha !
Raha misy ny filoham-pirenena raisin’ny Afrikanina ho modely amin’ny resaka fahaiza-mitantana sy fampandrasoana, ankehitriny, dia voalohany ny filoha Rwandais Paul Kagame. Tsy resaka fomba fijery izany fa porofo miharihary hitan’ny rehetra ny fandrosoan’i Rwanda izay nandalo ady an-trano mahatsiravina, tamin’ny taona 1994. Rehefa miresaka na manindrahindra an’i Paul Kagame anefa ny ankamaroan’ny Malagasy, dia iniana tsy resahana mihintsy ny fanapahan-kevitra noraisiny tamin’ny fanakatonana fiangonana kristianina miisa 6000 sy mosqué an-jatony tao Rwanda. Araka ny fanazavana nomen’i Paul Kagame moa dia tsy ny fivavahana akory no tsy tiany fa tsy ekena kosa ny fisian’ireo olona milaza ho pasitera na mpitondra fivavahana kanefa tsy nandalo fianarana teolojia akory. Tsy eken’ity filoha rwandais ity koa ny fanaovana fitaovana ny fiangonana amin’ny fanangonan-karena ka izay no antony tsy maintsy nandraisana fepetra hentitra.
Rehefa mijery ny firongatry ny fiangonana sekta eto Madagasikara, na eto Andrenivohitra na any amin’ny faritra dia tokony handray fepetra tahaka izao noraisin’i Paul Kagame ity koa ny mpitondra eto amintsika. Iza moa no tsy mahafantatra fa ny ankamaroan’ireo milaza ho pasitera manangana fiangonana zandriny etsy sy eroa dia tsy nandalo sekoly ambony momba ny teolojia akory. Ny sasany rehefa nahita ny vola rakitra sy ny ampahafolon-karena mitoboka tany amin’ny fiangonana nisy azy dia lasa nanangana sekta. Ny sasany indray tsy nianatra teolojia akory fa rehefa mba nahay baiboly kely sy malama vava dia nanangana sekta ihany koa. Izany trangan-javatra izany mihintsy no tsy mety amin’ny eritreritr’i Paul Kagame satria manao tsinontsinona sy manabado ny vahoakany. Eto amintsika, samy mahalala daholo koa ny rehetra fa resa-bola daholo ny ao ambadik’ireny fiangonana sekta mitsangana etsy sy eroa ireny. Tsy kisendrasendra raha lasa malaza eto amintsika ilay fiteny hoe “raha te hanan-karena haingana dia manangana sekta”.
Hatreto aloha dia mifanohitra tanteraka amin’ny zava-misy any Rwanda no misy eto amintsika satria mahazo alàlana avy amin’ny Fanjakana daholo iny pasietra sandoka rehetra manangana fiangonana. Torak’izany ny sehatry ny haino aman-jery dia mbola omen’ny minisitra Lalatiana Rakotondrazafy (Mama sôsy) alàlana hisokatra daholo ny onjam-peo ara-pilazantsara.